Biography nke Henry Cavendish na nnwale ya | Netwọk Mgbasa Ozi
Na ụwa nke sayensị enwere ọtụtụ mmadụ ndị tụlere onyinye dị ezigbo mma nke mere ka ụwa a gaa n'ihu. Taa, anyị ga-ekwu maka ya Henry Cavendish, onye Britain physicist na chemist bụ onye mbụ ịmata ọdịiche dị n'etiti carbon dioxide na hydrogen na ikuku. A họpụtara ya onye otu Royal Society na 1760 wee gụọ akwụkwọ na Mahadum Cambridge.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị akụkọ ndụ niile na ịkpa ike nke Henry Cavendish.
1 Henry Cavendish Biography
2 Nnwale na ọrụ
3 Henry Cavendish nwere
A matara onye sayensị a maka ibipụta ọrụ aha ya bụ Experiment na ikuku. N'ime ọrụ a, o kwuru na ikuku nwere ngwakọta nke oxygen na nitrogen na nha 1: 4. O tinyekwara ihe akaebe na mmiri abụghị ihe mmewere kama ọ bụ ngwakọta. Ruo oge ahụ, e chere na mmiri bụ otu ihe mejupụtara naanị mmiri. Otú ọ dị, ọ bụ Cavendish kwuru na mmiri nwere hydrogen na oxygen. O jisiri ike gosipụta nke a site na otu n'ime nnwale ya nke ọ nwere ike ịmepụta nitric acid na mmiri.
Ọrụ ya bụ ihe ama ama na ngalaba ọkụ eletrik site na iwebata echiche nke ikike, ịlele ikike na inwe ike ịtụ anya iwu Ohm. Ọ bụ otu n'ime ndị ọkà mmụta sayensị mbụ nwere ike ịchọpụta njupụta na oke nke mbara ụwa anyị site na itule torsion.
Naanị ntụaka Isaac Asimov kwuru banyere Henry Cavendish bụ ihe ndị a: «Ọ bụ onye maara ihe ma nwee ọgụgụ isi nke dịrị ndụ ma nwụọ n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ naanị ya. Ma o mere ụfọdụ n'ime ihe ndị kachasị adọrọ mmasị na akụkọ ihe mere eme nke sayensị. Okwesiri ighota na okwu Asimov mere ka imatakwu banyere ndu Cavendish. Ọ bụ onye eccentric nke were oge ya niile tinye aka na nyocha sayensị. O yikwara ka nkwenkwe ya banyere eluigwe na ala bụ na ọ mejupụtara ọtụtụ ihe ndị a pụrụ ịtụ, tụọ ma ree. Ka ọ na-erule mgbe ahụ, enweelarị m echiche ole na ole gbasara ụwa sayensị n'ozuzu ya.
Nnwale na ọrụ
Cavendish nwere ekele dị ukwuu maka nha dịka ọ chọrọ inwe ezigbo data oge niile. Ọ gbalịrị ịkọkọ atụmatụ ya niile ka ọ mata otu ihe iji mara nke ọma ihe nke ihe ndị ahụ. Ebe ọ bụ na o nweghi ammita ma ọ nweghị ihe ọ bụla nwere ike inye ya oke ọkụ eletrik na-ekesa site na wires, a na-ejikwa ya eme ihe n'ụzọ doro anya mana ọ na-eme tebụl akọwapụtara nke ọma. Nke ahụ bụ ịsị, Cavendish natara ujo ma ha gha eme ogwe aka na aru ya n'oge nyocha iji mara ma rịba ama ókè ike dị na eriri.
Ọrụ mbụ nke ọkà mmụta sayensị a metụtara arsenic. Ndị ọkà mmụta sayensị niile mara Cavendish na-ekwu na ịhụnanya o nwere na sayensị dị ọcha kpamkpam. Ọ dịghị echegbu onwe ya ma a ga-ebipụta ihe ndị ọ chọpụtara, otu ma ọ bụ na e depụtara ya ma ọ bụ na ọ bụghị, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ karịa imeju ọchịchọ ịmata ihe ya. Nke a bụ otu ị si amụta ihe ma nwee ọganihu na nyocha. N’ihi ezigbo ịhụnanya a n’ebe sayensị nọ, ọtụtụ n’ime ihe ndị ọ rụpụtara amabeghị ya kemgbe ọtụtụ afọ, a chọpụtakwara ya ọtụtụ afọ mgbe ọ nwụsịrị. Agbanyeghị, tupu ihe ọ rụzuru agaghi aha m, MSaac Asimov gwara ndị ọrụ ibe ya na Royal Society gbasara uru onye sayensị a bara.
Na 1766, ọ bụ onye na-ahụ maka ịkpọsa nchọpụta mbụ dị ka ọrụ ọ rụrụ na gas na-enwu ọkụ nke enwetara site na mmeghachi omume nke ọla na acid. Boyle na Hales chọtara gas a na mbụ, mana ọ bụ Cavendish ka enyere ọrụ ka ọ bụrụ onye izizi ga-amụ akụrụngwa ya. O ruola afọ iri abụọ ka nke ahụ gasịrị, Lavoisier kpọrọ gas a hydrogen.
Henry bụ ọkà mmụta sayensị mbụ chọpụtara na otu ụdị gas dị iche iche ga-atụle iji chọpụta njupụta ha. Nke a bụ otú o si chọta nke ahụ hydrogen bụ gas na-enweghị ọkụ bụ naanị 1/14 njupụta nke ikuku. N'ịbụ onye na-enwu ọkụ ma na-ere ọkụ, o kwenyere na ya nọpụrụ iche na phiston.
Henry Cavendish nwere
Buru n'uche na, n'oge ahụ, ọ bụ ihe ejiji ka ịme ikuku dị iche iche. Nke a mere na n’afọ 1785 o mere ka ọkụ eletrik na-agafere ikuku, ọ ga - agwakọta ngwakọta n’etiti nitrogen na oxygen iji gbari oxide nke pụtara na mmiri. N'ihi nnwale a, ọ chọtara ihe mejupụtara nitric acid. Ọ gbakwụnyere nitrogen n'ebumnuche nke ike iri oxygen niile dị na ya n'otu oge. Ọ bịara chọpụta na nke a ekweghị omume. Ma nke ahụ bụ mgbe niile o nwere ntakịrị akụkụ nke gas na-enweghị njikọ, ihe ọ bụla o mere.
Mgbe ahụ ọ chọpụtara na ikuku nwere obere gas nke ọ ga-abụ nke na-adịghị arụ ọrụ ma na-eguzogide ọgwụ ka ọ ghara imeghachi omume na ikuku ndị ọzọ. Ọ chọpụtakwara gas anyị maara taa dịka argon. Taa anyị maara na ikuku nwere 1% argon nke bu ikuku inert na adighi eme ihe obula. Anyị maara na ọ bụ ezigbo mmanụ gas. E leghaara nnwale Cavendish a anya otu narị afọ ruo mgbe Ramsay jisiri ike soro ya nzọụkwụ site na nzọụkwụ wee megharịa ya ọzọ.
Cavendish nwere ọmarịcha nnwale gụnyere ụwa dị ukwuu nke ọ jiri mee ihe ugbu a dị ka nnwale Cavendish. Site na nnwale a ọ matara ihe njupụta nke ụwa bụ na, ebe ọ bụ na a maara olu nke ụwa, ihe o mere bụ "tụọ" ụwa.
O nwere ọtụtụ mbipụta n'akụkọ ihe mere eme ya niile ma mụbaa ngwa ngwa mgbe ọ sonyere Royal Society yana ndị ọkà mmụta sayensị ndị ọzọ na-akwado nnwale ya. Dịka ị pụrụ ịhụ, nke a bụ onye ọkà mmụta sayensị nwere ezigbo ịhụnanya maka sayensị na ọ bụ naanị ọchịchọ ya mere ka ọ gaa n'ihu nyocha na ịchọpụta ihe ọhụrụ.
Enwere m olile anya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Henry Cavendish na uru ya niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Cavendish